Day 40. အချို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များ၊ အထူးသဖြင့်လူသစ်များဖြစ်သော Your Brain On Porn
နေ့ 40. အချို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များ၊ အထူးသဖြင့်အသစ်သော Nofappers များ
ငါဒီမှာ။ နေ့ 40 ။ အမှုအရာကိုကောင်းစွာသွားကြသည်; ကျောင်းကစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့နေဆဲအလုပ်ရှာနေပေမယ့်ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ကိုရှိသည်နှင့်ငါအပြုသဘောတည်းခိုနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤနံနက်နိုးနဲ့ကျွန်မရိုးရိုးသားသားကြောင့်ခဲ့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမေ့လျော့မိသောကြောင့်ယနေ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးခဲ့ရသည်။ နည်းနည်းအဘို့စဉ်းစားပြီးနောက်ကျွန်မ nofap ငါ၏နောက်ဆုံး 40 ရက်ပေါင်းစဉ်းစားအတွက်စိတ်ထဲလာသောသူအချို့အမှုအရာကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ ငါမတွေ့သို့မဟုတ်ငါအရင်ထွက်စတင်သောအခါဝန်ခံချင်ခဲ့ပါဘူးဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနီးကပ်အာရုံစိုက် nofap အသစ်သူများသည်။
ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်နှင့်မကောင်းတဲ့ရက်ပေါင်းရှိပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်, သင်အပြုသဘောနှင့်လုံခြုံခံစားရတယ်။ ထိန်းချုပ်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုကျပန်းမရှိကြပေ။ သူတို့ကသငျသညျအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက် setting ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသငျသညျရှေ့ကိုသငျသညျကျေနပ်လိမ့်မယ်တဲ့နေ့ကစုစည်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုချပြီးနေကြသည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ပျော်ရွှင်စေသည်, ဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်သောခံစားရ? အောင်မြင်မှုများ, ပန်းတိုင် setting တို့ကိုရရှိ, ဆက်သွယ်ထားသော; ဘာပဲသည်သင်ကောင်းတစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်တူသောအသံ, ထိုလုပ်ဖို့အချိန်ကိုရှာပါ။ တခါတရံသူကသင့်အတန်းသားအပေါင်းတို့မှတဆင့်ရတဲ့အတိုင်းသေးငယ်တဲ့င်, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အပြည့်အဝနေ့က။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်, ထိုတရားအားဖြင့်ရတဲ့အဘို့အသင်တို့အဘို့ကောင်းသော။ သငျသညျထိန်းချုပ်နေနှင့်သင်ကိုရွေးချယ်မည်သည့်ဦးတည်ချက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ခုတ်မောင်း, ဒါကြောင့်သင်ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်ဟုဦးတည်းကောက်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
မကောင်းတဲ့ရက်။ သူတို့ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ အရာအားလုံးအစုပုံကြီးနှင့်သင်၏ပခုံးပေါ်တွင်ကြီးမားသောအလေးချိန်သို့ snowball မှစတင်သောအခါ။ ပြီးတော့အဲဒါကသင့်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာလို့မခံစားရဘူး၊ သင့်ကိုကုန်ကျစရာမလိုဘူး၊ သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်၊ ဟောင်းနွမ်းသော fappin - ယခုသင်အလိုချင်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကိုနားမထောင်ပါနဲ့ ဆိုးသောနေ့ရက်များရောက်လာလိမ့်မည်။ သူတို့ပြုသည့်အခါသင်ဤအရူးခရီးကို ဦး ဆုံးအနေဖြင့်စတင်ခဲ့သောအကြောင်းပြချက် (များ) ကိုသင်သတိရရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းကာလများ၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ဤအတွေ့အကြုံမှရရှိခဲ့သည့်အရာများကိုအာရုံစိုက်ရန် PMO (porn, masturbation, orgasm) ကိုဘာကြောင့်ရှောင်ကြဉ်ရကြောင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စဉ်းစားခဲ့သည်။
သင်တစ်ဦးမကောင်းတဲ့နေ့ကရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးအသက်ရှူယူ recommit နှင့်အကောင်းတစ်ဦးတည်းရှိခြင်းကိုစတင်ပါ။ သင်, ပြန်သွားကြသည်ပြည့်စုံကင်လုပ်ခိုင်းနဲ့တူခံစားရတယ်, သင်သည်ဤလုပ်နေတာဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးနှင့် nofap သို့အခြားသောအစိုင်အခဲအားထုတ်မှုထားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အမှားကနေသင်ယူပါ။ သင်သည်အဘယ်သို့ရုန်းကန်စေသည်? အဘယ်အရာကိုသင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်? အဘယျသို့မဟုတျလော သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ Listen နှင့်သင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ရှောက်မည်။ သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် Organize ။
အပြုသဘောစဉ်းစားပါ။ သငျသညျတော့ဘူးရှိသည်မဟုတ်နိုင်သလဲဆိုတာအပေါ် (PMO) အာရုံစူးစိုက်မထားပါနဲ့။ အဲဒီအစားသင်ရဖို့ရန်ရှိသည်သောအရာကိုအာရုံစိုက်သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုစောင့်ရှောက်။ အဘယ်အရာကိုသင်ဤအတွေ့အကြုံကိုထဲကရတဲ့နေကြသည်။ ပိုများသော Self-ထိန်းချုပ်မှု? ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏သည် သာ. ကောင်း၏နားလည်မှု? တစ်ခုစွဲကန်? ပိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာ? ပိုကောင်းတဲ့အလားအလာမိတ်ဖက်ဖြစ်လာ? သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေူခင်း? ထိုသို့ဘာပဲသင်မှာအလုပ်မလုပ်မဟုတ်လျှင်အဲဒီမှာ get နှင့်မကောင်းတဲ့ရက်ပေါင်းတဆင့်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်ကိုယ်တိုင်မှမုသာမသုံးနိုငျသညျ။ သငျသညျအခြို့သောပိုပြီး risque subreddits သို့မဟုတ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ browse သို့မဟုတ်သင် nofap ရန်သင့်ကတိကဝတ်များအတွက်ကောင်းသောမဟုတ်ကိုသိသောသငျ့စိတျသောအရပ်တို့ကိုမယူလိမ့်မည်ဟုဗီဒီယိုများကြည့်ချင်ပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်နက်ရှိုင်းချသင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အခွအေနေကူညီပေးနေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သင်ကိုယ်တိုင်မှမုသာမသုံးနိုငျသညျ။ သင်တို့ပြုချင်ကြပါဘူးတစ်ခုခုလုပ်နေတာလျှင်သင်ကိုငါသိ၏။ လူတိုင်းသင်ကူညီရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
အခြားလူအတွက်ထောက်ခံမှုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါ။ ကျွန်တော်တို့အများစုကအဘို့, အဲဒီအပေါ်မှီခိုဆိုလိုတယ် / r / NoFap နှင့်၎င်း၏ဆက်ကပ်အပ်နှံအသုံးပြုသူများကကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆော်မှု, အကြံပေးခြင်း, နှင့်အာရုံပြံ့လှငျ့ပေးစေခြင်းငှါ။ ဤလူများသည်သင်၏မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသငျသညျတစျဆငျ့တာပေါ့အရာကိုသိနှင့်သင့်နာကျင်မှုနှင့်အတူစာနာနိုင်ပါတယ်။ အကူအညီအဘို့ထိုသူတို့မေးပါ, ပြက်လုံးဖြစ်စေလျက်, အရေးကြီးသောနှင့်သာမန်ဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာအကြောင်းပြောဆို။ ငါသည်ငါ့ nofap အကြောင်းကိုမှပွင့်လင်းခဲ့ကြတချို့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများရှိသည်ဖို့လုံလောကျကံကောင်းဖြစ်၏။ သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှငါကဒီမှာပေါ်ကအကြောင်းစကားပြောခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကရန်မလိုအပ်ပါသောအတိုင်းအတာအထိငါ့အကတိသစ္စာနားလည်ပါတယ်။ အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာသူတို့သည်ငါ၏ကတိကဝတ်ငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်နားလည်ပြီးသူတို့ကငါ့ကိုကူညီပံ့ပိုးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့ကလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကအကြောင်းပြက်လုံးလုပ်ပေမယ့်သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်, တစ်ခါတစ်ရံကိုယ့်ကိုယ်ပြုံးရယ်မပေးနိုငျတယျဆိုရငျကော
ငါ၏အ nofap ၏အစောပိုင်းကာလ၌ငါ sex အကြောင်းစဉ်းစားရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ တိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်ပြုနိုင်သမျှ။ ငါဘယ်နေရာမှာငါ့ကိုယူသော PMO သံသရာ၏အလုံအလောက်ခဲ့ပြီးမှငါတဦးတည်းညဦးယံအချိန်အအေးကြက်ဆင်တော့ဘူး။ ဒီတော့အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ထိန်းညှိဖို့အချိန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥစ္စာလည်းမည်။ သင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်တခြားနည်းလမ်းတွေသို့ချန်နယ်ဖို့လိုအပ်မယ့်အကြောင်း, ပိုလျှံစွမ်းအင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မဟုတ်ရင်ရှိသည်သွားနေကြသည်။ ကချန်နယ်တစ်လမ်းကိုရှာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကိုကြီးစွာသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်ငါ့ arousal ကျော် obsessing မှငါ့စိတ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူးအခါ, ငါ 10 တွန်းအားပေး ups လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ရိုးရှင်းတဲ့။ တကျိပ်တွန်းအားပေး ups ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏ heartrate အနည်းငယ်ပိုမြန်ခဲ့ရှာတွေ့မယ်လို့ငါရှင်းလင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်, ငါ, ငါ့နေ့ရက်ကာလ၌နောက်တစ်နေ့ခဲ့သမျှကိုစတငျဖို့ပိုစွမ်းအင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ 50 နှင့် 100 တွန်းအားပေး ups အကြားလုပ်ခဲ့တယ်ပေးပါ့မယ်။ ငါ၏အ scumbag ဦးနှောက်ကယ့်ကိုတက်သရုပ်ဆောင်သောအခါသူတို့အားစုံ၏အချို့ back ပြန်ခဲ့ကြသည်။ တစ်နေ့နေ့မှာငါဘယ်သူမျှမပြုလေ၏။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။
nofap နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံက individualize ဖို့အချိန်ကိုယူပါ။ ဘယ်သူမှဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်ငါပြုမည်ထက် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုပိုပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်သိတယ်, ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးခြင်းအလုံအလောက်ကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ masturbated အခါ, ငါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ funneling နှင့်အစစ်အမှန်အကြှနျုပျအဘို့ဘယ်နေရာမှာဦးဆောင်သောငါ၏စိတ်တွင်ကးကိုခံခဲ့ရသည်။ porn နဲ့အတူတူပါပဲလုပ်နေတာ၏အခြားသောလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တဖန်ငါတဖန်တုံ, အစစ်အမှန်ကလူနဲ့ညစ်ညူးသောပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့ရရှိသွားတဲ့နှင့်ငါနှစ်ဦးစလုံး porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျဆင်းသွားသည်ဟုဆိုလိုသည်သူကောင်လေးဖြစ်ချင်တယ်။ သို့သော်သင့်အတှေ့အကွုံဖြစ်မရှိပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် porn ညံ့ဖျင်းသငျသညျထိခိုက်, သို့မဟုတ်သင့်ဦးခေါင်း, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ messing ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်၎င်း၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလွန်းသို့မဟုတ်ပါကသင်၏ကျန်းမာရေး / သာယာဝပြောရေး / လူနေမှုပုံစံစတဲ့တခြားရှုထောင့်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ရဲ့လျှင်။ ငါ့အဘို့ကနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ကျေနပ်အပေါ်ဒီတော့အာရုံစိုက်ကြောင့်ငါအစစ်အမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမှကိုယ့်ကိုယ်ကို numbing ခဲ့သည်။ အဘယ်သို့ငါဆိုရမည်မှာဖို့ကြိုးစားနေတာပါသင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ကြပြီးသင်သည်သင်၏အသက်တာ၌အပြောင်းအလဲတစ်ခုလိုခငျြအဘယ်ကြောင့်အဘယ်အရာကိုတကယ်ထွက်တွက်ဆဖို့အချိန်ယူဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့, တစ်ဦးကတိကဝတ်အဖြစ်နည်းလမ်းများ nofap အဘယ်အရာကို Define ။ ငါ့အဘို့ဖြစ်၏တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့မျှဝေဖို့နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်လိင်အကြောင်းပိုမိုရှင်းလင်းစွာစဉ်းစားရန်အကြှနျုပျကိုအားပေးဖို့စောင့်ဆိုင်း၏မျက်နှာကို ထောက်. တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှဘဲ, porn, နှင့် (စသည်တို့ကို edging,) ဆက်စပ် Self-ပျော်မွေ့သည်။
အမှုအရာပိုလွယ်လိမ့်မယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်မှာရှိ, ငါ့အသက်ကိုနေဆဲစိတ်ဖိစီးမှုသည်နှင့်ငါ juggling သူဖြစ်ကြောင်းကိုတာဝန်ဝတ္တရား၏တစ်တန်ရှိသည်။ ဒါကပြောင်းလဲသွားမထားပါဘူး။ ငါ PMO ကငါ့အသက်ကိုအနေဖြင့်ကြာမြင့်သောအရာကိုပေးသနားတော့ဘူးငါ့အစိတ်ဖိစီးမှုမှသက်သာရာရစေရန်အကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏စဉ်းစားကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဘယျသို့ပြောင်းလဲသွားပြီငါစိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် decompress သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါကျေနပ်သောအခြားအမှုအရာကိုတွေ့ပါကအစားထိုး။ ယခုငါရိုးသားစွာနေ့ရက်ကာလ၌တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် porn စဉ်းစားကြပြီမဟုတ်။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိန်းညှိဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ် / စိတ်ကိုအချိန်ကိုပေးလျှင်, ငါသည်သင်ပြီးမြောက်နိုင်ဘူးဘာမှမရှိဘူးကြောင်းယုံကြည်မိပါတယ်။
သငျသညျတခါတရံ porn ပေါ်ကိုသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှု, ဖွယ်ရှိလဲရှိနေသော်လည်းမည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံကထွက် click နှိပ်ပြီးနှင့်သင့်တစ်နေ့တာအကြောင်းကိုသွားပါ။ သတိရဖို့အရေးကြီးဆုံးအရာသည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကွောငျးတှေ့ဖို့ဆိုလိုသလား? မရလျှင်သင်ဘာမှမမှားပြုမိပါဘူး။ ဒီတော့လျှင်သင်ကိုယ်သင် recommit နှင့်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကဆက်ပြောသည်အခက်အခဲကြောင့်ငါသည် porn လိုပဲငါကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုပြောထားပြီးအဘယ်အရာကိုမကြိုက်ဘူးကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဂုဏျနိမျ့ကြောင်းမီဒီယာ, ဆိုလိုသည်မှာ၏ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ သူတို့သာသင်သည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ထင်သောအရာကိုရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်မီဒီယာ၏အမျိုးအစားငါအများကြီးကျရှုံးဆိုလိုတာက, နေရာတိုင်း flippin လျှင်။ ငါကနေ refraining နှင့်တစ်လျှောက်ရွှေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်ကြောင့်သို့သော်လည်းငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးပါ။
ငါ add နိုင်ပိုပြီးအမှုအရာရှိပါတယ်သေချာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုစဉ်းစားရန်ပဒေသာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့အတိတ်လူတိုင်းကျေးဇူးတင်လိုခြင်းနှင့်အပေါ်ကိုတင်ပြမယ်လို့ / r / NoFap အဘယ်သူသည်ငါထံမှလေ့လာသင်ယူကြပြီဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်တင်ပြချက်များထောက်ပံ့ဖို့တုန့်ပြန်နှင့်သိရပါတယ်